ချယ်လ်ဆီးနာမည်ကျော်ကစားသမား ဟာဇက်ရဲ့ လူသိနည်းတဲ့ အကြောင်းအရာများ
ချယ်လ်ဆီးနာမည်ကျော်ကစားသမား ဟာဇက် Hazard ရဲ့ လူသိနည်းတဲ့ အကြောင်းအရာများ
30 Jul 2018 . 4:41 PM
ဟာဇက် Hazard ဆိုတာက လက်ရှိကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Top Ten စာရင်းဝင် ကစားသမားတစ်ဦးဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ဘူး။ အချက်အလက်တွေအရလည်း ဟာဇက်က World Best Dribbler (ဘောလုံးဆွဲပြေးမှုအကောင်းဆုံး) ကစားသမားတစ်ဦးလို့ သတ်မှတ်ခံထားရတယ်။ တိတိကျကျပြောရရင်တော့ ပွဲကစားချိန် (၁၄.၁)မိနစ်ကြာတိုင်း အောင်မြင်တဲ့ ဘောလုံးဆွဲပြေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရာခိုင်နှုန်းအရဆိုရင် (၈၀.၄)ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိနေတယ်။
ဟာဇက်ရဲ့စွမ်းရည်တွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေကို ဇောင်းပေးဖော်ပြချင်တာ မဟုတ်လို့ ကွင်းတွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို နောက်မှ သီးသန့်ရေးပါဦးမယ်။
အခုပြောချင်တာက ဟာဇက်ရဲ့ကွင်းပြင်ပ Lifestyle ပါ။ ဟာဇက်ရဲ့ပရိသတ်တွေလည်း သူတို့အားပေးတဲ့ကစားသမားရဲ့ မိသားစုဘ၀က ဘယ်လို၊ ဘယ်အရာတွေ ကြိုက်နှစ်သက်လဲ၊ Relationship နဲ့ပတ်သက်တာ စတာတွေကို သိချင်မှာပဲ။ ဒါကြောင့် ဟာဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူသိနည်းသေးတဲ့ အချက်အလက်တချို့ကို ဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် . . .
တစ်မိသားစုလုံးက ဘောလုံး Crazy
ဟာဇက်ရဲ့မိသားစုမှာ ညီအစ်ကို(၄)ဦးရှိပြီး ဟာဇက်က အကြီးဆုံးသားပါ။ ဘောလုံးလောကမှာ ဟာဇက် ကျင်လည်နေသလို သူ့ရဲ့ညီတွေဖြစ်တဲ့ Thorgan ၊ Kylian ၊ Ethan တို့ကလည်း ဘောလုံးသမားတွေဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားတာက ဟာဇက်ရဲ့ အဖေနဲ့အမေကလည်း ဘောလုံးသမားတွေဖြစ်ကြတာပါပဲ။ ဟာသဆန်ဆန် ပြောရရင် ဟာဇက်ရဲ့အဖေနဲ့အမေက ဘောလုံးဖူးစာဖက်လို့ပဲ ဆိုရမလား။ သူ့အဖေက Defensive Midfielder အဖြစ် ကစားခဲ့ပြီး ဟာဇက်ရဲ့အမေဆိုရင် အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းမှာ တိုက်စစ်မှူးဖြစ်ပါတယ်။ ဟာဇက်အမေက ဘယ်လောက်အထိ ဘောလုံးကစားရတာ ကြိုက်သလဲဆိုရင် ဟာဇက်ကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး (၃)လအထိ ဘောလုံးကစားပြီးမှ အနားယူခဲ့တာပါ။
ဇီဒန်း Zidane က ဟာဇက်အတွက် Idol
ပြင်သစ်ဂန္ထ၀င်ကြီး ဇီဒန်းဆိုတာက 90 Born ဘောလုံးသမားတိုင်း အားကျလေးစားစရာခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ပြီး အဲဒီအထဲမှာ ဟာဇက်လည်း တစ်ဦးအပါအ၀င်ပေ့ါ။ ဇီဒန်းရဲ့ ကစားဟန်တွေကို ကြည့်ပြီး ကြီးပြင်းခဲ့ရတာကြောင့် ဟာဇက် ကစားပေါက်က ဇီဒန်းနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်တူတာကို ပရိသတ်တွေ သတိပြုမိလိမ့်မယ်။ ရီးယဲလ်ကို ဟာဇက် ပြောင်းရွှေ့ချင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက သူ့ရဲ့ Idol ကြီး ကစားခဲ့ဖူးတဲ့အသင်းဖြစ်နေတာကြောင်လည်း ပါပါတယ်။
ဟာဇက်ဟာ ဘောလုံးလောကမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့်စာရင်းဝင် ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် ဘောလုံးပြီးရင် သူအကြိုက်ဆုံး အားကစားနည်းက ဘက်စကတ်ဘောပါ။ အရင်တုန်းကဆိုရင် ချယ်လ်ဆီးဘက်စကတ်ဘောအသင်း၊ ဘယ်လ်ဂျီယံဘက်စကတ်ဘောအသင်းအတွက် ပါဝင်ကစားခဲ့ဖူးပါတယ်။ နာမည်ကြီးဘကတ်စကတ်ဘောပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ NBA ပွဲတွေကို မလွတ်တမ်းကြည့်ပြီး သူအကြိုက်ဆုံး အသင်းတွေက New York Knicks နဲ့ Kristaps Porzingis အသင်းတွေပါပဲ။
ဟာဇက်ကို ကြိတ်ကြွေနေတဲ့ အမျိုးသမီးပရိသတ်တွေအတွက်တော့ ကြေကွဲစရာပါပဲ။ ဟာဇက်ဟာ သူနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာ တွဲခဲ့တဲ့ ချစ်သူ Natacha Van Honacker နဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တုန်းက လက်ထပ်ခဲ့ပြီးသားပါ။ အခုဆိုရင် သူတို့ဇနီးမောင်နှံမှာ Yannis ၊ Leo ၊ Samy ဆိုတဲ့ သား(၃)ဦး ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဒါတွေကတော့ ဟာဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လူသိနည်းတဲ့ အကြောင်းအရာတချို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟာဇက် ပရိသတ်တွေလည်း အခု ဆောင်းပါးတိုကို ဖတ်ပြီး ကိုယ့်အားပေးတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦးအကြောင်းကို တခြားသူတွေဆီ ဖောက်သည်ချလို့ရအောင် ဖော်ပြလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ် . . .
Photo:independent,Twitter,Marca,These Football Times
ခယျြလျဆီးနာမညျကြျောကစားသမား ဟာဇကျ Hazard ရဲ့ လူသိနညျးတဲ့ အကွောငျးအရာမြား
ဟာဇကျ Hazard ဆိုတာက လကျရှိကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး Top Ten စာရငျးဝငျ ကစားသမားတဈဦးဆိုတာ ဘယျသူမှ မငွငျးနိုငျဘူး။ အခကျြအလကျတှအေရလညျး ဟာဇကျက World Best Dribbler (ဘောလုံးဆှဲပွေးမှုအကောငျးဆုံး) ကစားသမားတဈဦးလို့ သတျမှတျခံထားရတယျ။ တိတိကကြပြွောရရငျတော့ ပှဲကစားခြိနျ (၁၄.၁)မိနဈကွာတိုငျး အောငျမွငျတဲ့ ဘောလုံးဆှဲပွေးမှု ပွုလုပျခဲ့ပွီး ရာခိုငျနှုနျးအရဆိုရငျ (၈၀.၄)ရာခိုငျနှုနျးအထိ ရှိနတေယျ။
ဟာဇကျရဲ့စှမျးရညျတှေ၊ အောငျမွငျမှုတှကေို ဇောငျးပေးဖျောပွခငျြတာ မဟုတျလို့ ကှငျးတှငျးစှမျးဆောငျရညျကို နောကျမှ သီးသနျ့ရေးပါဦးမယျ။
အခုပွောခငျြတာက ဟာဇကျရဲ့ကှငျးပွငျပ Lifestyle ပါ။ ဟာဇကျရဲ့ပရိသတျတှလေညျး သူတို့အားပေးတဲ့ကစားသမားရဲ့ မိသားစုဘဝက ဘယျလို၊ ဘယျအရာတှေ ကွိုကျနှဈသကျလဲ၊ Relationship နဲ့ပတျသကျတာ စတာတှကေို သိခငျြမှာပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဟာဇကျနဲ့ပတျသကျပွီး လူသိနညျးသေးတဲ့ အခကျြအလကျတခြို့ကို ဖျောပွလိုကျတာပဲဖွဈပါတယျ . . .
တဈမိသားစုလုံးက ဘောလုံး Crazy
ဟာဇကျရဲ့မိသားစုမှာ ညီအဈကို(၄)ဦးရှိပွီး ဟာဇကျက အကွီးဆုံးသားပါ။ ဘောလုံးလောကမှာ ဟာဇကျ ကငျြလညျနသေလို သူ့ရဲ့ညီတှဖွေဈတဲ့ Thorgan ၊ Kylian ၊ Ethan တို့ကလညျး ဘောလုံးသမားတှဖွေဈပါတယျ။
ထူးခွားတာက ဟာဇကျရဲ့ အဖနေဲ့အမကေလညျး ဘောလုံးသမားတှဖွေဈကွတာပါပဲ။ ဟာသဆနျဆနျ ပွောရရငျ ဟာဇကျရဲ့အဖနေဲ့အမကေ ဘောလုံးဖူးစာဖကျလို့ပဲ ဆိုရမလား။ သူ့အဖကေ Defensive Midfielder အဖွဈ ကစားခဲ့ပွီး ဟာဇကျရဲ့အမဆေိုရငျ အမြိုးသမီးဘောလုံးအသငျးမှာ တိုကျစဈမှူးဖွဈပါတယျ။ ဟာဇကျအမကေ ဘယျလောကျအထိ ဘောလုံးကစားရတာ ကွိုကျသလဲဆိုရငျ ဟာဇကျကို ကိုယျဝနျဆောငျပွီး (၃)လအထိ ဘောလုံးကစားပွီးမှ အနားယူခဲ့တာပါ။
ဇီဒနျး Zidane က ဟာဇကျအတှကျ Idol
ပွငျသဈဂန်ထဝငျကွီး ဇီဒနျးဆိုတာက 90 Born ဘောလုံးသမားတိုငျး အားကလြေးစားစရာခဲ့ရတဲ့သူဖွဈပွီး အဲဒီအထဲမှာ ဟာဇကျလညျး တဈဦးအပါအဝငျပေ့ါ။ ဇီဒနျးရဲ့ ကစားဟနျတှကေို ကွညျ့ပွီး ကွီးပွငျးခဲ့ရတာကွောငျ့ ဟာဇကျ ကစားပေါကျက ဇီဒနျးနဲ့ခပျဆငျဆငျတူတာကို ပရိသတျတှေ သတိပွုမိလိမျ့မယျ။ ရီးယဲလျကို ဟာဇကျ ပွောငျးရှခေ့ငျြတဲ့ အကွောငျးရငျးတဈခုက သူ့ရဲ့ Idol ကွီး ကစားခဲ့ဖူးတဲ့အသငျးဖွဈနတောကွောငျလညျး ပါပါတယျ။
ဟာဇကျဟာ ဘောလုံးလောကမှာ ကမ်ဘာ့အဆငျ့စာရငျးဝငျ ကစားသမားတဈဦးဖွဈပမေယျ့ ဘောလုံးပွီးရငျ သူအကွိုကျဆုံး အားကစားနညျးက ဘကျစကတျဘောပါ။ အရငျတုနျးကဆိုရငျ ခယျြလျဆီးဘကျစကတျဘောအသငျး၊ ဘယျလျဂြီယံဘကျစကတျဘောအသငျးအတှကျ ပါဝငျကစားခဲ့ဖူးပါတယျ။ နာမညျကွီးဘကတျစကတျဘောပွိုငျပှဲဖွဈတဲ့ NBA ပှဲတှကေို မလှတျတမျးကွညျ့ပွီး သူအကွိုကျဆုံး အသငျးတှကေ New York Knicks နဲ့ Kristaps Porzingis အသငျးတှပေါပဲ။
ဟာဇကျကို ကွိတျကွှနေတေဲ့ အမြိုးသမီးပရိသတျတှအေတှကျတော့ ကွကှေဲစရာပါပဲ။ ဟာဇကျဟာ သူနဲ့နှဈပေါငျးမြားစှာ တှဲခဲ့တဲ့ ခဈြသူ Natacha Van Honacker နဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှဈတုနျးက လကျထပျခဲ့ပွီးသားပါ။ အခုဆိုရငျ သူတို့ဇနီးမောငျနှံမှာ Yannis ၊ Leo ၊ Samy ဆိုတဲ့ သား(၃)ဦး ပိုငျဆိုငျထားပွီးဖွဈပါတယျ။
ဒါတှကေတော့ ဟာဇကျနဲ့ပတျသကျပွီး လူသိနညျးတဲ့ အကွောငျးအရာတခြို့လညျးဖွဈပါတယျ။ ဟာဇကျ ပရိသတျတှလေညျး အခု ဆောငျးပါးတိုကို ဖတျပွီး ကိုယျ့အားပေးတဲ့ ကစားသမားတဈဦးအကွောငျးကို တခွားသူတှဆေီ ဖောကျသညျခလြို့ရအောငျ ဖျောပွလိုကျရတာပဲဖွဈပါတယျ . . .